Jurgen Klopp Oo Qiimeeyey Awoodda Dalkiisa Germany Ee Euro, Digniinna U Diray England - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaJurgen Klopp Oo Qiimeeyey Awoodda Dalkiisa Germany Ee Euro, Digniinna U Diray England
Jurgen Klopp Oo Qiimeeyey Awoodda Dalkiisa Germany Ee Euro, Digniinna U Diray England
June 27, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Kulamada Caalamiga Ah 0
Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa qiimayn ku sameeyey awoodda xulka qarankii Germany ee tartanka Euro ee Salaasada garoonka Wembley kula ciyaari doona England.
Xulka qaranka Germany ayaa kasoo gudbay Group-ka dhimashada iyagoo haysta badis iyo barbarro, kulanka kalena uu Faransiisku ka badiyey, waxaana saluug laga muujiyey qaab ciyaareedkooda kulankii ay ku dhibaatoodeen ee Hungary oo ay barbarro waqti dambe ah keeneen, taas oo haddii laga badin lahaa ay tartanka ka hadhi lahaayeen.
Jurgen Klopp oo u warramay wargeyska BILD ee kasoo baxa Jarmalka ayaa waxa la weydiiyey haddii dalkiisu uu yahay mid liita oo uu ka saarayo saadaasha dalalka tartanka ku guuleysanaya, iyadoo Ingiriiskana ay ballansan yihiin Salaasada.
Klopp ayaa sheegay in ay tahay ‘waalli’ haddii Jarmalka laga saaro dalalka fursadda u haysta inay ku guuleystaan tartanka, waxaanu muujiyey niyad-samaan badan oo uu ka arkay qaab ciyaareedkooda kulamadii France iyo Portugal.
“Waalli ayay noqonaysaa haddii laga saaro Jarmalka [dalalka ku guuleysanaya koobka]” Ayuu si kooban u yidhi.
Waxa uu raaciyey: “Si fiican ayaanu ula ciyaarnay France, anaga ayaa si adag u maamulaynay ciyaartii Portugal, balse haa, waanu dhibaatoonay ciyaartii Hungary, laakiin waxba may dhicin.
“Mararka qaarkood waad u baahan tahay ciyaarta noocaas oo kale ah (kulankii Hungary), haddana waa in aanu si dhab ah ugu diyaar noqono Salaasada [kulanka England]”.
In Jurgen Klopp uu waalli ku tilmaamay in Jarmalka laga saaro xisaabta dalalka guuleysanaya, waxay digniin dadban u tahay Ingiriiska.